Nduzi Onwe Onye China Manufacturers & Suppliers & Factory
Nduzi Onwe Onye - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Nduzi Onwe Onye)
Igwe ọkụ dị ọkụ na-ekpo ọkụ dị ọkụ
Nkọwapụta ngwaahịa A na-echekwa ihe mgbochi a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ. N'iji mgbanwe zuru oke, ihe siri ike, ihe na-adịghị na mmiri na ihe mgbochi, nke a na-ehichapụ ọ bụla maka anụ ụlọ ọ bụla . A na-ekpo ọkụ ngwa ngwa, ya na usoro kpo oku nke na-achịkwa onwe ya. ọ na-adịgide adịgide na-eji ike karịa...
Snake na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ
Ntughari na Amphibians na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na -eme ka ọkụ na-egbuke egbuke maka amịpụta na amphibian, ọ na- enye okpomọkụ maka ihe na- emepụta ihe na amphibian, nyere ha aka ịgafe n'oge oyi. Nkọwapụta Ngwaahịa Isi ihe: PVC size: 200 * 300mm, ahaziri dị elekere: 16w, ahaziri aha voltage: 120v, ahaziri dị Max...
Nduzi Onwe Onye Nduzi onwe onye Ntuzi onwe-ya Ntuzi onwe onye Ịkụ Mgbochi Ezi igwe ejiji Ntọala nke Onwe Onye Na-ekpo ọkụ Ezi Oko Ogo Ogo Ihe ndozi na-eme ihe nkiri